Reinfeldt: Dhaqaalo xumada waxaa lagu xalin karaa suuqa EU oo la furfuro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Reinfeldt: Dhaqaalo xumada waxaa lagu xalin karaa suuqa EU oo la furfuro
La daabacay onsdag 23 maj 2012 kl 16.58
Madaxa dawladda ee dalka Iswiidhen ayaa ka soo hor-jeeda fikirrada la hor keeni doono Kulanka aan caadi ahayn oo ey caawa fiidkii isugu iman doonaan hogaamiyeyaasha waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub. Kulankaasina oo tooshka lagu saari doono xaaladda dhaqaale ee Yurub. Qorshe ka mid ah fikirrada looga doodi doono ayuu ka mid yahay mid cusub ee la xiriira qorshooyin lagu hir-gelinayo howlaha aasaasiga waddammadaa. Halka uu Reinfeldt middaa ka shaki qabo:
- Aad ayaan uga shakisannahey, islamarkaana ma garawsanin waxa loo isticmaali doono. Waxay u dhadhameeysaa sidiiyo loo kala qeeybinayo waddammada halista dhaqaale si eynaan wanaag u arag.
Su'aal laga doodi doono ayaa ah maxaa hor-seedi kara koboc dhaqaale?
Dhankayaga uma aragno in maal-gelin noocaasiya xal u noqon karto. Haddii middaasi suurtagal tahayna waxaa dhici lahayd in waddammada Gariigga iyo Isbaanishku hor-muud u ahaan lahaayeen dhaqaalaha Yurub, sida uu sheegay Reinfeldt.
- Waxey noola muuqataa in kobaca dhaqaale ee Yurub ku xiran yahay iyada oo suuqyada la furfuro. In la helo heshiiyo baayacmushtar ee lala yeesho waddammada leh kobaca dhaqaale. Iyo Sidii Yurub looga suurtagelin lahaa shirkado ku howl-gala adeegga. Howlahaa ayaan u argnaa kuwo keeni kara koboc dhaqaale.
Su'aasha kale ee kulanka lagu soo qaadi doono ahna su'aal horay dhowr jeer looga dooday ayaa ah jeegagga dhaqaale ee dawladaha EU-da (euroobligationer), si ey suurtagal waddammada ugu noqoto deeymo la siiyo. Madaxa dawladda Iswiidhen, Reinfeldt ayaa sidoo kale carrabka u laadlaadiyay amuurtaa, halka ey middaa ka siman yihiin si cad oo keliya Angela Merkel, hogaamiyaha dalka Jarmalka:
- Aas ahaan ayaan u arkaa in fikirkani khaldan yahay. Waana fikir aan soo ban-dhigi doono, xitaa haddii aan middaa ka mideeysannahey oo keliya Angela Merkel, sida uu sheegay madaxa dawladda Iswiidhen Fredrik Reinfeldt.